UNicole, isiphepho seshumi nane sesine esishisayo esizokwakhiwa e-Atlantic | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kubukeka sengathi izivunguvungu zasezindaweni ezishisayo ngeke zinikeze ukuthula. ISiphepho uMathewu sisasebenza, futhi isiphepho esishisayo senzeke izolo Nicole, enyakatho-mpumalanga yePuerto Rico. Iya enyakatho-ntshonalanga, futhi ayibeki songo okwamanje, kanti isimo kulindeleke ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela.
Imimoya ephezulu ebhaliwe ifinyelele kusivinini se- 85km / h, futhi uhamba ngo-13km / h.
Lesi siphepho sitholakala cishe emakhilomitheni angama-840 ukusuka enhlokodolobha yasePuerto Rico, eSan Juan. Ochwepheshe bakholelwa lokho ngeke lube khona ushintsho oluningi ngamandla ezinsukwini ezimbili ezizayo, ngoba umoya weSiphepho uMatthew uqobo ungakuvimbela lokho kungenzeki, njengoba kwabikwa encwadini yezindaba evela I-Wunderground.
Ngemuva kwalesi sikhathi, uNicole kungaba ukucindezeleka kwasezindaweni ezishisayo, okungukuthi, isiphepho esakhiwa emanzini asezindaweni ezishisayo, esinendawo ehlelekile ezungeza iye ngaphesheya kwezinaliti zewashi. Izici zayo zimi kanje:
Ijubane lomoya: 0 kuye ku-62km / h.
Ukucindezela okuphakathi: ngaphansi kuka-980 mbar.
Kungadala umonakalo omkhulu nezikhukhula, kepha uNicole akulindelekile ukuthi ahlasele izindawo ezinabantu abaningi.
Ngakho-ke, le nkathi yesiphepho e-Atlantic isivele yakha izivunguvungu eziyishumi nane, ezithi ezinhlanu seziyiziphepho (U-Alex, Earl, odale umonakalo omkhulu eMexico, eGastón, eHermine naseMathewu). I-National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) wabikezela ukwakhiwa kweziphepho eziyi-16, kusukela ngoJuni 1 kuya kuNovemba 30 walonyaka. Yize kufanele uhlale uqaphile, ngoba kwesinye isikhathi izivunguvungu zasezindaweni ezishisayo ziphume ngaphandle kwenkathi, njengoba besibona ngoJanuwari ngokwakhiwa kuka-Alex, okwakhiwa ngoJanuwari 14, eba ngaphambi kwesikhathi kakhulu kusukela ngo-1938 .
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » UNicole, isiphepho seshumi nane sesine esishisayo esizokwakhiwa e-Atlantic
ICalifornia isengozini yokuzamazama komhlaba okukhulu
Ukuguquka kwesimo sezulu kungayibulala iNASA